सुत्केरी बेसीमाया र १७ घोगा मकै | चितवन पोष्ट दैनिक
Updated: ४ चैत्र, २०७०
सुत्केरी बेसीमाया र १७ घोगा मकै
४ चैत्र, २०७०
बच्चा जन्माउने बेलामा जनावरहरु पनि योजना बनाउँछन् रे । त्यो के हो भने खाना पर्याप्त हुने समय आँकलन गरेर त्यो बेलामा बच्चा जन्मने गरेर उनीहरुमा गर्भाधान हुन्छ रे । हामी मान्छे त्यत्ति पनि विचार गर्दैनौँ त ? यो पटक जिल्लाको पहाडी क्षेत्र घुम्न जाँदा देखेको अवस्थाले मेरो दिमागमा यही प्रश्न खडा गरेको छ । पशुले जति पनि योजना बनाउन नसक्ने अवस्थामा मान्छे कसरी पुग्यो, यसमा विचार–विमर्श हुन आवश्यक छ । त्यसमा त्यो परिवार मात्रै नभएर अरु को, कसको कमजोरी रहन गयो, सबैले मनन् गर्न अपरिहार्य पनि छ ।
चितवन जिल्लाको पहाडी गाविस लोथरको वडा नं. ९ कान्दा गाउँ निकै विकट ठाउँ हो । सदरमुकाम भरतपुरबाट जाँदा भण्डारासम्म सर्लक्कको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हुँदै जान सकिन्छ । त्यसपछि भण्डाराबाट उत्तर पहाडी कच्ची बाटोमा दुई घन्टा जिपमा गएपछि हात्तीढाप भन्ने ठाउँसम्म पुगिन्छ । हात्तीढापबाट कान्दा लाग्दा गाडी चढ्न पाइँदैन, पैदल हिँड्नुपर्छ । पैदल पनि सामान्य हो र, जब्बर उकालो पसिना चुहाउँदै हिँड्नुपर्छ । हिँड्न सक्नेलाई चार घन्टा, हिँड्न नसक्ने रहेछ भने त दिनभर । यस्तो ठाउँमा रहेको कान्दा गाउँका सीताबहादुर चेपाङकी श्रीमती बेसीमाया सुत्केरी भएकी छन् ।
चैत्र महिना चेपाङ गाउँमा अनिकाल लाग्छ, न घरमा अन्न हुन्छ न वनमा सिस्नो । साग तथा तरूल, गिठ्ठा–भ्याकुरजस्ता कन्दमूल मात्र भेटिन्छन् । यस्तो बेला फागुन १४ मा बेसीमायाको कोखबाट छोरो जन्मियो । उनको कोखबाट जन्मेको त्यो पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौँथो, पाँचौँ, छैँटौँ या दसौँ सन्तान थिएन । त्यो त एघारौँ सन्तान थियो । अनिकालका बेला एघारौँ सन्तान जन्माउने रहर कसलाई हुँदो हो, अनि बाध्यता पनि त्यस्तो के परेको होला ? सायद, परिवार नियोजनका बारेमा जानकारी नहुनु नै यसको मुख्य कारण हो । परिवार नियोजन शिक्षा त्यतातर्फ लैजाने कसले, सरकारले ?
गाउँमा यो पटक स्थायी बन्ध्याकरण गर्न चिकित्सकहरुको टोली पनि पुग्यो । फागुन २९ गते बिहान ९ बजे काम सुरू गर्ने योजनामा रहेको टोली मध्यान्हसम्म पनि गाउँका एक जना नआउँदा निराश देखियो । मध्यान्हपछि आए सीताबहादुर, अनि केही सोध्न खोजे । मेरो घरमा १५ दिनकी सुत्केरी छ, मैले पनि अप्रेसन गर्ने र ? खानेकुरा केही छैन । सुत्केरीलाई खुवाउन त मकै पैँचो मागेको, कतै फेला परेन । गाउँको हालत यस्तो छ, अनि किन गर्ने अप्रेसन ? कामको चाप पर्दा र खान्की नहुँदा स्थायी बन्ध्याकरण गर्नाले नराम्रो असर गर्छ भन्ने ठहर गाउँलेलाई रहेछ, त्यसैले उनी क्याम्पतिर नदेखिएका रहेछन् । चिकित्सकहरुले सीताबहादुरलाई सम्झाए । उनी तयार भए । सीताबहादुर अगाडि सरेपछि अरु पनि निस्किए, स्थायी बन्ध्याकरण गर्न ।
सीताबहादुरले सुनाएको कुरो संवेदनशील थियो । पैँचो माग्दा पनि मकै पाइएन । गाउँमा मकैसमेत रहेनछ यो बेला । उनले आमासँग मकै मगाए । आमाले सीताबहादुरकी भान्जी लीलामायासँग मकै पठाइदिइन् । मकै थिए, उनीहरुका सन्तानभन्दा ठ्याक्कै छ बढ्ता अर्थात् १७ घोगा मकै आयो, सीताबहादुरकी आमाको घरबाट । दुई दिन त्यही मकै खाँदा १० घोगा सकिए । ‘अब बाँकी रहेको सात घोगामा मैले कति खाने, सुत्केरीलाई कति दिन खुवाउने ?’ सीताबहादुरको चिन्ता थियो ।
दुई हप्ताकी सुत्केरी बेसीमाया जसको घरमा खानलाई अन्नसमेत छैन, सापट मागेको मकैसमेत सकिने बेला भयो । ओहो, के होला उनको हालत ? हामी हेर्न गयौँ उनको घर । ११ सन्तान लहरै सुते नअटाउने साँघुरो घर रहेछ उनको । पिँढीमा भेटिइन् बेसीमाया । ढाडमा बोकेकी थिइन् नवजात शिशुलाई । उनी गाईबाख्रा हेर्न तयार हुँदै रहिछन् । दुई हप्ताको बालक ढाडमा राखेर काममा निस्कने उनको मेसोलाई हामीले केही अलमलायौँ । उनको कोखबाट ११ सन्तान जन्मे पनि दुईको निधन भएको रहेछ, अर्थात् नौ सन्तान मात्रै हुर्केका, जसमध्ये कोही कता कोही कता र अहिले साथमा चार जना ।
बेर भयो बेर भन्दै पिँढीमा बसेर आँगनमा लौरोले खोस्रिरहेकी उनी हाम्रा कुराकानी धेरै सुन्ने पक्षमा थिइनन् । पछ्यौराले ढाडमा शिशु कसेर उनी बाख्रा धपाउँदै पर लागिन् । प्रतिमा सिलवाल अलि परसम्म गएर उनको कुरा सुन्न खोजिन् । बेसीमायाको हाल अलिअलि होइन, धेरै नै बेहाल रहेछ । रक्तस्राव रोकिएकै रहेनछ । अघिल्ला पालामा दुई महिनासम्म यस्तो भएको थियो रे । त्यसैले, उनले यस्तो अवस्थालाई पनि सामान्य नै मानिरहेकी थिइन् ।
यो परको होइन, सचेतहरुको बसोबास रहेको चितवन जिल्लाकै एउटा गाउँको कथा हो । अनि बेसीमायाको मात्रै होइन, गाउँका लगभग सबैको अवस्था यस्तै हो । अहिले ४३ वर्ष भएकी बेसीमायाको जेठो सन्तान २१ वर्षको भयो । उनी विगत २१ वर्षदेखि लभभग दुई वर्षको फरकमा सन्तान जन्माउँदै आएकी छन् । दुई सन्तान ईश्वरको वरदान अथवा सन्तान करले होइन, रहरले जन्माऊँ भन्ने सहर र सुगममा सुनिने आकर्षक नारा उनको कानमा परेकै छैन ।
महिला गर्भवती भएदेखि बच्चा नहुर्कंदासम्म विशेष स्याहार र आहार चाहिन्छ । यो त बेसीमायालाई आकासको फल नै भयो । राज्यले गर्भवती भएदेखि सुत्केरी नहुँदासम्म कम्तीमा चार पटक स्वास्थ्य संस्थामा जँचाउने र स्वास्थ्य केन्द्रमा नै सुत्केरी गराउने नीति लिएको छ । बेसीमायाको नसिबमा यो पनि छैन । ११ सन्तान जन्मँदा पनि उनले अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्र तथा खोप र आइरन चक्की देख्न पाइनन् । बच्चाको अवस्था पनि त्यही हो ।
स्वास्थ्य सेवा नपाए पनि धेरै ग्रामीण भेगहरुमा पाका महिलाहरुले सुत्केरी हुने बेलामा सघाउँछन् । बेसीमायाले त्यस्तो सहारा पनि पाउँदिनन् । व्यथा लागेमा खेत र जंगल दौडिएर त्यतै बच्चा जन्माएपछि सालनाल छुट्टाएर बच्चा पोको पारेर घर छिर्ने चलन छ, चेपाङ समुदायमा । यस्तो परिस्थितिका बारेमा राज्य पूरै बेखबर छ । जहाँ गाडी जान्छ वा गाडीबाट झरेर आधा घन्टा हिँडेर जहाँसम्म पुग्न सकिन्छ, सरकारको उपस्थिति लगभग त्यत्तिमा मात्रै सीमित छ । लगभग चार वर्षअघि विषालु जंगली च्याउ खाएर सोही गाउँका आठ जनाको ज्यान गयो । त्यत्रो घटना भएको ठाउँमा राज्य अझैसम्म आफैँ गएको छैन भनेपछि स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत सुविधा पुगे नपुगेको के खबर राख्नु !
च्याउ खाएर आठ जनाको निधन भएपछि रिपोर्टिङका लागि कान्दा पुगेका पत्रकार एकल सिलवालले गाउँलेको अवस्था उकास्न मिसन कान्दा नै सुरू गरे । यसपटकको स्थायी बन्ध्याकरण शिविर पनि त्यसैको उपज थियो । कान्दामा अहिले पहिलेको भन्दा धेरै राम्रो भएको छ । तर गाँस, बास र कपास तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षामा धेरै गर्न बाँकी नै छ भन्छन्, सीताबहादुर पनि । कान्दामा अझैसम्म नपुगेको भनेको सरकार हो, सरकार । मकै पैँचो मागेर सुत्केरी स्याहार्ने गाउँमा पुग्ने कि सरकार, कुनै दिन ?